भाइरल बालिका कमला घिमिरे बिरामी, भनिन् अब म बोल्न सक्दिनँ ! (भिडियो) - Sidha News
भाइरल बालिका कमला घिमिरे बिरामी, भनिन् अब म बोल्न सक्दिनँ ! (भिडियो)
काठमाडौं। ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेले गाएको लाइभ दोहोरी अहिले युटुबमा अत्याधिक भाइरल भएको छ। मै हु भन्ने गायक गायिकालाई समेत पछाडी पार्दै लाइभ दोहोरी गएकी छिन् ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरेले ।
पछिल्लो समय युटुब देखि समाजिक् संजाल सबैतिर भाइरल भएकी ११ बर्षीय बालिका कमला घिमिरे अन्तत इन्द्रेणीमा आएकी छिन। कृष्ण कंडेलले संचालन गर्ने इन्द्रेणीमा अहिले लाइभ दोहोरी गाउदै छिन् । उनको ठुलो चाहना थियो इन्द्रेणी सम्म पुग्ने उक्त चाहना आज पुरा भएको छ ।
कमलाले चर्चित गयक राजु परियार, टिका सानु,रबिन लामिछाने लगाएतका चर्चित गायकहरु संग दोहारी गएका कमलाले कसैलाई पनि अगी बड्न दिएनन् । उनको यो अद्भूत कला देखेर सबै चकित परेका छन् । भाइरल कमला घिमिरे एक्कासि रुदै मिडियामा – भनिन् अब म बोल्न सक्दिन…हेर्नुहोस् भिडियो: